Kaafi News » FAALLO:- SHIR JARAA’ID BY CUMAR MAXAMED FAARAX
FAALLO:- SHIR JARAA’ID BY CUMAR MAXAMED FAARAX
Muddo Haatan laga joogo 15 sannadood ka hor oo aan ka shaqo galay Wargeyskii Maandeeq ee imika la yidhaahdo Dawan, waxaan ugu imi iyadoo warbaahinta tirada badan ee xilligan Somaliland ka jirtaa faro ku tiris tahay, gaar ahaan Jaraa’idka oo ahaa Jamhuuriya iyo Maandeeq. Halka Telefishannada tirada beelay wakhtigan-na uu jiray Hargeysa TV oo habeenkii laga daawan jiray shanta degmo ee caasimada Hargeysa gudaheeda, TV-gaas oo markii dambena loo bixiyay Somaliland Space Chanel (SLSC). Waxa kaloo jiray Idaacada Radio Hargeysa oo maantana xaga idaacadaha wali kaligeed uun ka jirta wadanka.
Waxa jiray tusaale ahaan wargeyskii Maandeeq oo ahaa wargeyskii labaad oo la aasaasay sannadkii 1998-kii, waxa sabankii aan ku cusbaa ka shaqeyn jiray weriyeyaal xirfad leh oo aqoontooduna aad u dhisnayd oo intooda badan heer jaamacadeed ahaa. Waxa raggaas odayaasha ahaa ay qofka shaqada ku cusub sidayda oo kale ay siin jireen wacyigelin dheer oo ay ku hoggotusaaleyn jireen in shaqada saxaafaddu tahay “Xirfad dadkeeda laga doonayo dhawrsanaan, akhlaaq iyo masuuliyad.”
“Waxaan idinku amrayaa in aad su’aalo waxtar leh oo xaqiiqo ah, xirfadeed oo adag aad weydiisaan siyaasiga shirkaas jaraa’id qabanaya,”ayuu ahaa aragtida Guddoomiyihii iyo Tifaftirihii MAANDEEQ, oo si maalinle ah ugu dardaari jireen suxufiyiintii wargeyskaas ka hawlgeli jiray.
Shirka jaraa’id, waxa khasab ahaa oo siyaasiga ama masuulka qabtay uu hadalkiisa ku bilaabi jiray warbixin yar oo kooban oo uu faahfaahin jiray ujeeddadiisa, ka dibna waxa suxufiyiintu ka haqab beeli jireen inay waydiiyaan su’aalo aad u badan wax ku oolna ah oo hadafkoodu ahaa “Lafta jabi xaragana ha ka tagin.” wax kasta qofka waa la su’aali jiray waxase suxufiyiintu u dhigi jireen si asluub leh oo togan. Waxase macruuf ahayd in wakhtiyada qaar in qofku hadalkiisa ku bilaabi jiray inuu ka afeefto inaan wax su’aalo ah la weydiin, balse suxufiyiintu way sheegi jireen markay qorayaan ama baahinayaan warkaas in aan su’aalo la weydiin.